Data lehibe, andraikitra lehibe: Ahoana no ahafahan'ny SMB manatsara ny fomba fanao ara-barotra mangarahara | Martech Zone
Data lehibe, andraikitra lehibe: Ahoana no ahafahan'ny SMB manatsara ny fomba fanao ara-barotra mangarahara
Zoma, Febroary 4, 2022 Zoma, Febroary 4, 2022 Meghan Bazaman
Tena ilaina ny angona mpanjifa ho an'ny orinasa madinika sy antonony (SMBs) mba hahatakarana bebe kokoa ny filan'ny mpanjifa sy ny fomba ifandraisany amin'ny marika. Ao amin'ny tontolo tena mifaninana, ny orinasa dia afaka misongadina amin'ny fampiasana angon-drakitra mba hamoronana traikefa manan-danja kokoa ho an'ny mpanjifany.
Ny fototry ny paikady data mpanjifa mahomby dia ny fahatokisan'ny mpanjifa. Ary miaraka amin'ny fiandrasana mitombo ny varotra mangarahara kokoa avy amin'ny mpanjifa sy ny mpandrindra, tsy misy fotoana tsara kokoa hijerena ny fomba fampiasanao ny angon-drakitra mpanjifa sy ny fomba hanatsarana ny fomba fanao ara-barotra izay mamboly fahatokisana sy fahatokisana ny mpanjifa.
Ny fitsipika dia mitondra fitsipika fiarovana ny angona mahery vaika kokoa
Ny fanjakana toa an'i California, Colorado, ary Virginia dia nampihatra ny politikan'izy ireo manokana momba ny fomba ahafahan'ny orinasa manangona sy mampiasa ny angona mpanjifa. Any ivelan'i Etazonia, ny Lalàna momba ny fiarovana ny mombamomba ny tena manokana ao Shina sy ny Fitsipika ankapobeny momba ny fiarovana ny angona ankapoben'ny EU dia samy mametraka fameperana amin'ny fomba fanodinana ny angona manokan'ny olom-pirenena.
Fanampin'izany, ireo mpilalao teknolojia lehibe dia nanambara fanovàna ny fomba fanaraha-maso angon-dry zareo manokana. Ao anatin'ny roa taona manaraka dia ho lany andro ny cookies avy amin'ny antoko fahatelo Google Chrome, hetsika manaraka ny mpitety tranonkala hafa toa an'i Safari sy Firefox izay efa nanomboka nanakana ny cookies fanaraha-maso avy amin'ny antoko fahatelo. Apple nanomboka nametraka fameperana ihany koa ny angon-drakitra manokana voaangona amin'ny fampiharana.
Miova koa ny fanantenan’ny mpanjifa.
Ny 76%-n'ny mpanjifa dia somary manahy momba ny fomba fanangonana sy fampiasana ny angon-drakitr'izy ireo manokana ny orinasa. Ankoatra izany, 59% amin'ny mpanjifa no milaza fa aleony miala amin'ny traikefa manokana (oh: doka, tolo-kevitra, sns.) toy izay hanara-maso ny hetsika nomerika ataon'ny marika.
Gartner, Fomba fanao tsara indrindra momba ny tsiambaratelo momba ny angon-drakitra: Ahoana no hangatahana vaovao amin'ny mpanjifa mandritra ny areti-mifindra
Amin'ny ho avy, afaka manantena famerana bebe kokoa isika mba hiarovana ny angon-drakitra manokana. Ireo anton-javatra ireo dia manondro ny filana ny famerenana indray ny fomba fanao ara-barotra mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny politikan'ny governemanta izy ireo fa koa maneho ny fiovan'ny indostria sy ny andrasan'ny mpanjifa.
Ny vaovao tsara dia ny fiarovana ny angon-drakitra mpanjifa dia efa laharam-pahamehana ho an'ny SMB maro.
Ny 55% amin'ireo SMB nohadihadiana ao amin'ny US dia manome ny angon-drakitra sy ny teknolojia fiarovana amin'ny fampahalalam-baovao ho zava-dehibe amin'ny fampandehanan-draharahany, manondro ny fiahiahiana ny fiarovana ny angon-drakitra mpanjifa. (Jereo ny faran'ny pejy ho an'ny fomba fanadihadiana.)
GetAppNy 2021 Top Technology Trends Survey
Ahoana ny fampitana ny fomba fanao amin'ny angonao amin'ny mpanjifa ny orinasanao? Ato amin'ity fizarana manaraka ity, isika dia handrakotra fomba fanao tsara indrindra amin'ny varotra mangarahara izay manampy amin'ny fanamafisana ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fahatokisana.
Fitaovana sy toro-hevitra hanatsarana ny fomba fanao ara-barotra mangarahara
Ireto misy dingana vitsivitsy azon'ny mpivarotra atao sy fitaovana azo ampiharina izay afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fomba fanao ara-barotra mangarahara.
Omeo fifehezana bebe kokoa ny mpanjifa – Voalohany indrindra, zava-dehibe ny manome fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny fomba fanangonana sy fampiasana ny angonany. Tafiditra ao anatin'izany ny fanomezana safidy hifidy sy hivoaka ho an'ny mpanjifa mizara data manokana. Ny lozisialy miteraka fitarihana dia mety ho fitaovana ilaina amin'ny alàlan'ny famelana anao hamorona endrika tranonkala izay manangona mangarahara ny angon'ny mpanjifa.
Ampahafantaro mazava ny fomba hiarovana ny angona mpanjifa – Ataovy mazava tsara ny fomba fanangonana sy fampiasanao ny angona mpanjifa. Hazavao amin'ny mpanjifa ny hetsika ataonao mba hiarovana ny angon-dry zareo na raha misy fiovana atao amin'ny fiarovana azy. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana ara-barotra iray manontolo mba handrindrana ny hafatra momba ny fiarovana ny angon-drakitra mpanjifa sy ny fampiasana amin'ny fantsom-pifandraisana marobe.
Manolora tena sanda ho takalon'ny angona – Milaza ny mpanjifa fa voataonan'ny valisoa ara-bola izy ireo ho takalon'ny angon-drakitr'izy ireo manokana. Eritrereto ny manolotra tombony azo tsapain-tanana ho an'ny mpanjifa ho takalon'ny angonany. Ny rindrambaiko fanadihadiana dia fomba tsara hangatahana sy fanangonana angon-drakitra mazava ho takalon'ny valisoa ara-bola.
Ny 53% amin'ny mpanjifa dia vonona ny hizara ny angon-drakitr'izy ireo ho takalon'ny valisoa vola ary 42% ho an'ny vokatra na serivisy maimaim-poana. 34% hafa indray no milaza fa hizara angon-drakitra manokana ho takalon'ny fihenam-bidy na tapakila.
Mahaiza mandray andraikitra - Ny fanekena haingana sy mangarahara ny fangatahana na ny ahiahin'ny mpanjifa dia hanampy amin'ny fananganana fahatokisana, dingana iray lehibe ho an'ny traikefan'ny mpanjifa tsara. Ny fitaovana manolotra automation ara-barotra, personalization, media sosialy, mailaka, ary fiasa amin'ny chat dia afaka manampy ny orinasanao amin'ny fomba mahomby sy mamaly tsy tapaka ny mpanjifa.
Mangataha valiny - Fanomezana ny fanehoan-kevitra! Mariho ny fomba fiasan'ny tetika ara-barotrao amin'ny alàlan'ny fandehanana mivantana any amin'ny loharano-ny mpanjifanao. Ny fanangonana valiny tsy tapaka dia ahafahan'ny ekipan'ny varotra hanitsy ny paikady araka izay ilaina. Ny fitaovana fikarohana momba ny tsena dia afaka manampy anao hanangona sy hamakafaka ny angona rehefa manadihady ny mpanjifanao.
Ataovy azo antoka fa manana drafitra momba ny teknolojianao ianao
Araka ny nozaraiko teo ambony, misy fomba maro hampiasana fitaovana hanohanana ny fomba ara-barotra mangarahara, saingy tsy ampy ny fananana teknolojia tsotra izao. In GetAppFanadihadiana momba ny fironana ara-barotra 2021:
Ny 41% amin'ny fanombohana dia milaza fa tsy namolavola drafitra momba ny teknolojian'ny varotra. Ankoatra izany, ireo startups izay tsy manana drafitra momba ny teknolojia ara-barotra dia avo efatra heny noho ny filazana fa tsy mahafeno ny tanjon'ny orinasany ny teknolojia ara-barotra.
GetAppNy fanadihadiana momba ny fironana ara-barotra 2021
Ny orinasanao dia mety ho liana amin'ny na mampiasa karazana rindrambaiko maromaro hanangonana angon-drakitra sy hampitana fomba fanao amin'ny mpanjifa. Mba hahazoana tombony betsaka amin'ny teknolojia sy hiantohana ny fahombiazany dia zava-dehibe ny mamorona a drafitra teknolojia marketing ary araho izany.
Raha resaka varotra marina sy mangarahara no resahina dia betsaka no atahorana — fahatokisana, fahatokisana ny mpanjifa ary tsy fivadihana. Ireo toro-hevitra ireo dia teboka fanombohana hiomanana amin'ny fiovan'ny tontolon'ny fiarovana ny angon-drakitra sady manamafy ny fifandraisana amin'ny mpanjifa.
Visit GetApp ho an'ny fanadihadian'ny lozisialy sy ny fomba fijerin'ny manam-pahaizana hanampy anao handray fanapahan-kevitra stratejika.
GetAppNy 2021 Top Technology Trends Survey dia natao nanomboka tamin'ny Aogositra ka hatramin'ny Septambra 2021, tamin'ireo namaly 548 manerana an'i Etazonia, mba hamantarana ny filan'ny teknolojia, ny fanamby ary ny fironana ho an'ny orinasa madinika. Voatery nandray anjara tamin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana teknolojia any amin'ireo orinasa manana mpiasa 2 ka hatramin'ny 500 ireo namaly ary nitazona toerana ambony na ambony ao amin'ny orinasa.
GetAppNy fanadihadiana momba ny Marketing Trends dia natao tamin'ny Aprily 2021 tamin'ireo mpamaly 455 any Etazonia mba hianatra bebe kokoa momba ny fironana ara-barotra sy teknolojia. Nosavaina ho amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny varotra, varotra, na serivisy mpanjifa amin'ny orinasa misy mpiasa 2 ka hatramin'ny 250 ireo namaly.
Tags: fanehoan-kevitry ny mpanjifafiainana manokana an'ny mpanjifafikarohana nataon'ny mpanjifafahatokisan'ny mpanjifaangona ho an'ny mpanjifafiarovana data mpanjifafanehoan-kevitry ny mpanjifaDataFiarovana ny angonagartnerdata gartnerfikarohana gartnergetappgoogle chromedrafitra teknolojia marketingfironana marketingfanadihadiana momba ny fironana ara-barotrapersonal datatraikefa manokanapiifanaraha-maso ny mpanjifa amin'ny Internet
Meghan Bazaman dia mpanadihady zokiolona ao amin'ny GetApp, mizara hevitra momba ny teknolojia ara-barotra sy ny rindrambaiko vao misondrotra. Nianatra Advertising tao amin'ny The University of Texas ao Austin izy ary manana traikefa momba ny teknolojia, media, fitsaboana ary ecommerce nanomboka tamin'ny 2011. Talohan'ny nidirany GetApp, Meghan dia nitantana fandalinana fikarohana momba ny varotra syndicated ary nitarika hetsika ara-barotra votoaty ho an'ny orinasam-pahalalana manan-danja, hevi-baovao ary mpanolo-tsaina. Manana fahaiza-manao manokana izy amin'ny fanaovana fikarohana fanadihadiana, famoronana sary an-tsary, ary fanolorana hevi-baovao ho an'ny mpandray anjara.
Queue-it: Ampio efitrano fiandrasana virtoaly amin'ny tranokalanao mba hitantana ny firongatry ny fifamoivoizana
Brax: Mamorona, amboary, ary ampitomboy ny dokam-barotrao avy amin'ny dashboard tokana